Nyika Yotarisana neNzara Inotyisa
Hurumende inoti pane matunhu ari munyika ari kuda rubatsiro nechikafu nechimbi chimbi mushure mekunge mvura yaramba kunaya zvakanaka. Matunhu ane nzara anosanganisira Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands, Masvingo neManicaland
Vachitaura nebepanhau reHerald, gurukota rezvekurima, Va Joseph Made, vanoti vaudza kambani yeGrain Marketing Board, kana kuti GMB, kuti ritange kuendesa chibage kunzvimbo idzi nechimbi chimbi. Asi GMB inoti haina mari yekufambisa chibage ichi kuenda kunzvimbo dzabatwa nenzara.
Va Made vanoti sagi remakirogiramu makumi mashanu rinenge richitengeswa nemadhora gumi nematanhatu.
Dare remakurukota rinonzi rakazeya nyaya iyi rikati GMB inofanira kuchimbidza kuendesa chibage kunzvimbo idzi.
Vakuru ve GMB havana kuda kutaura parunhare pamusoro penyaya iyi. Studio7 haina kukwanisa kutaura naVa Made.
Sachgaro webhodhi yeNANGO, Amai Dadirayi Chikwengo, vanoti hurumende inofanira kushanda nemasangano makuru anopa chikafu akaita seWorld Food Program nemamwe kuti paitwe ongororo inoburitsa pachena kuti vanhu vangani munyika vanoda rubatsiro nekuti GMB haikwanisi kubatsira vanhu vese vasina chikafu.
Hurukuro naMai Dadirayi Chikwengo